Dadka da'da ah - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Dadka da'da ah
Degmooyinku waxay Finland dadka da'da ah ugu qabanqaabiyaan adeegyo, si nolol maalmeedku ay ugu fududaato islamarkaasna ay awoodi karoodaan inay mudo dheer deganaadaan guriga. Haddii aad Guri degmo ee gudaha Finland waxaad xaq u leedahay adeegyada ay degmadu bixiso.
Waad deganaan kartaa guri haddii uu xitaa caafimaadku liito haddii qeybaha gurigu ay shaqeynayaan. Guriga waxaa lagu sameyn isbedel fududeynaya deganaanshihiisa.
Shaqada degmooyinku waa inay u qabanqaabiyaan degista adeegga leh iyo degista la kaalmeeyo dadka u baahan. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Degista kaalmada iyo adeegga leh.
Dadka dalka u soo guuray ee waqti dheer oo ku filan deganaan Finland waxay shuruudo lamid ah shuruudaha dadka deggan Finland ku heli karaa hawlgabka da'da ama awoodis la'aanta shaqada darteed. Cadada halwgabka waxaa sameyn ku leh waqtiga uu qofku deganaa ama ka shaqeynahyay Finland. Si kastoo ay ahaata damaanadqaadka hawlgabka ayaa sugaya kaalmada nolosha ee ugu yar saddex sano oo deganaansho ah kadib. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Hawlgab.
Dhaqdhaqaaqista darteed waxaa suurtagal ah in amaah lagu helo qalabyo la kaalmeysto oo kala duduwan, tusaale ahaan usha socodka ama gaariga lugaha leh. Haddii aad u baahantahay qalabka la kaalmeysto marka hore la xiriir rugtaada caafimaadka. Rugta caafimaadka waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabka la kaalmeysto.
Sidabada xiliga qabowga banaanku waa sidib. Kabatoleyaasha iyo qaar ka mid ah tukaamada waaweyn waxay iibiyaan sidib celiyeyaal (liukueste), kuwaas oo lagu xiri karo kabaha caadiga ah hoostooda. Sidoo kale waxaad tukaamada kabaha ka soo iibsan kartaa kabo qodxo leh (nastakengät), kuwaas oo ay sahlantahayn in lagula socdo jid sidib ah.
Degmooyinku waxay dadka da’da ah u qabanqaabiyaan daryeel guri (kotihoito) oo ay ku jiraan caawimaadda meerto maalmeedka iyo guri ku daryeelista bukaanka.
Adeegyada gurigu waa ka caawinta hawlmaalmeedyada sida qubeysasashada, labisashada dharka iyo cunteynta. Guri ku daryeelista bukaanku waa daryeel caafimaad iyo baxnaano lagu sameeyo guriga. Dhaqtarka ayaa qorayo gudbinta guri ku daryeelista bukaanka si loo helo. Kuwaan waxaa dheer oo jira adeegyo guri, kuwaas oo ah tusaale ahaan cuntada, nadaafadda, dukaameysiga, adeegyada ammaanka iyo caawimaadda gaadiid ku qaadista.
Marka aad u baahantahay guri ku daryeelis, la xiriir qeybta daryeelka guriga ee degmadaada. Daryeelka guriga ee degmadu waa lacag. Marka daryeelka gurigu uu yahay joogto, daqliga lamaanahaada iyo adiga ayaa saameyn ku yeelanaya tirada lacageed ee daryeelka gurigu uu joogo. Dadka oo dhan waxaa laga qaadaa qiimo isku mid ah marka daryeelka gurigu uu yahay mid ku meelgaar ah. Degmadu waxeys sidoo kale ku siin kartaa jeega adeegga, oo aad adeeg uga iibsan karto bixiyaha adeegga ee ay degmadu aqbalsan tahay.
Haddii aad Guri degmo ee gudaha Finland waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka shacabka. Marka aad jirato, la xiriir rugta caafimaadka ee soonahaada. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Adeegyada caafimaadka ee Finland.
Markaad ku xanaanaynayso guriga ehelkaaga
Markuu u baahan yahay xubana qoyskaaga daryeel iyo caawimaad joogta ah daryeelkuna yahay mid joogta ah oon sahlaneyn, daryeelista suurtagal ahaan waxaad ku heli kartaa in lagaa kaalmeeyo xanaanayta ehelka. Kaalmadaas waxaa loogu talagalay kuwa ku ah deegaanka Finland Guri degmo ee gudaha Finland. Cadada kaalmo iyo sida lagu helayo waxaa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin degmooyinka qaar. Kaalmada waxaad ka codsan kartaa xafiiska arrimo bulshada degmadaada. Si aad uheshid kaalmada, waa inaad heshiis lagashaa xanaanaynta ehelkaaga degmadaada. Macluumaad dheeraad ah xanaanaynta ehelka waxaa ka helaysaa xafiiska arrimaha bulshada ee deegaankaaga.
Kaalmada dhaqaale waxa dheeriya ooy degmadu qabanqaabisaa adeeg yo kala duwan, taasoo lagu caawinayo ku xanaaneyaha guriga. Degmada waxay sidoo kale u sameysaa dadka da’da ah howl-maalmeed. Howl-maalmeedkaas waxaa ka mid ah gadiidkii qaadi lahaa, raashin, jimicsi ama howlo kale. Weydii macluumaad dheeriya xafiiska arrimaha bulshada ee degmadaada.
Macluumaad ku saabsan guri-ku-daryeelida ehelka(pdf, MB)Finnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish
Hagaha adeega ee dadka qaraabadooda xanaaneeyaFinnish
Lacagta cawinaada ee qaraabo daryeelidaFinnish
Lacagta cawinaada ee qaraabo daryeelidaFinnish | Iswidish